မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ပါတီ အင်န်အယ်ဒီ – U Win Tin | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ပါတီ အင်န်အယ်ဒီ – U Win Tin
မှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့ပါတီ အင်န်အယ်ဒီ – U Win Tin
Posted by kai on Oct 5, 2011 in Copy/Paste, Interviews & Profiles, Politics, Issues | 15 comments
ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများကို မိုးမခမှ တိုက်ရိုက်ကူးယူဖေါ်ပြသည်။ http://moemaka.com/
သေချာစွာဖတ်ရှုလေ့လာပြီး အောက်ပါ Poll ကို ဖြည့်စွက်ပေးစေလိုပါသည်။
ပြောရရင် မိုးမခက.. ဒီရက်ပိုင်းဘာမပြောညာမပြောနဲ့.. ၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ CMS စံနစ်တခုလုံးပြောင်းထားပါတယ်.။
အဲဒီတော့.. ကျုပ်တို့ နဲ့တူတူ WordPress ဖြစ်လို့နေတာပေါ့..။
အခုစာတွေယူသုံးတာ.. ခွင့်မတောင်းထားပါဘူး..။ မကျေမနပ်ဖြစ်မယ်တော့ မထင်ပါ။ ထင်လည်း တောင်းပန်ပြီး ပြန်ဖျက်လိုက်တာပေါ့နော..။
ဦးဝင်းတင်တို့ မှာ ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာမရှိတော့.. . ပြောနေတာတွေက.. လူတွေအသိပေးချင်လို့ပဲယူဆပြီး.. (အချိန်လည်းကိုက်နေတာမို့..) ကူးတင်ပေးလိုက်တာပါပဲ..။
ဆိုတော့.. အဲဒီမိုးမခမှာလည်း ..ကော်မန့်တွေသွားရေးလို့ရပါတယ်..။ အဲဒီမှာတော့..ပွိုင့်မပေးပါဘူး..။
ဦးဝင်းတင်ဆီ International Calling ဖုံးဆက်ရတာမို့.. ဖုံးဖိုးကုန်မှာက ပိုများမယ့်ပုံပေါက်ပါတယ်..။
ဒီမှာတော့.. ပြည်တွင်းလူတွေလည်း တော်တော်ကြည့်ကြဖတ်ကြတာမို့… Poll လုပ်ပေးထားတာပါ…၊
စိတ်ရှင်းရှင်းထားပြီး.. အစွဲမပါပဲ ဖြည့်ကြည့်စေလိုတာပါပဲ..။
မကြာခင် အင်န်အယ်ဒီကတခုခုဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီမှာ.. Vote ငါပေးထားတာနဲ့တူတယ်ဆို.. နိုင်ငံရေးပရောဟိတ်ကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး.. ဂုဏ်ယူချင်ယူပေါ့နော..။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်မှာ လက်ရှိမြန်မာပြည်အတွင်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အဓိကထားမေးဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးအောင်ကြည်တို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ လက်ရှိအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆွေးနွေးတာတွေ၊ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြည်သူ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ရှေ့အလားအလာတွေအကြောင်းကို သဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အင်န်အယ်ဒီက အစိုးရယခင်ကပြောနေတဲ့ ဖျက်သိမ်းခြင်းခံထားရသော အင်န်အယ်ဒီဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကနေ မှတ်ပုံမတင်ထားသော ပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး သုံးစွဲလာတယ်။ လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေ ဆိုလိုတာက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ပြီးတာထက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ မှာ မှတ်ပုံမတင်တဲ့သဘောဆိုပြီး ရည်ရွယ်ပြီး ပြောလာတယ်။ အဲသည်လိုမျိူး အသုံးအနှုံးကို ဆရာဘယ်လို သဘောထားသလဲ။
ကျနော့်သဘောထားကို မပြောခင် လက်ရှိ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမျိုးမျိူးအဖုံဖုံပြောနေတဲ့ သဘောထားတွေကို ပြောပြချင်တယ်။ အင်န်အယ်ဒီက ၂၀၁၀
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ မှတ်ပုံမတင်ခဲ့ဘူး။ အခု ၂၀၁၁ မှာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ တမျိူးတဖုံဖြစ်လာမှာမို့လို့ အင်န်အယ်ဒီပါတီက မှတ်ပုံတင်ချင် တင်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောလာတာတွေ ရှိနေတယ်။ ကျနော်ကိုယ်ပိုင်သဘောထားကို ပြောရမှာကတော့ အဲသည်တုံးက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ အင်န်အယ်ဒီပါတီကို မှတ်ပုံမတင်ခဲ့ဘူး။ အဲသည့်အတွက် သူတို့က အင်န်အယ်ဒီပါတီက ဖျက်သိမ်းပြီးဖြစ်သော ပါတီဆိုပြီး ပြောဆို သုံးစွဲလာခဲ့ကြတယ်။ အခုကျတော့ မှတ်ပုံမတင်သေးတဲ့ ပါတီဆိုပြီး သုံးစွဲလာတော့ အများအမြင်မှာ မှတ်ပုံတင်တော့မလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါက လိုရာကို ဆွဲပြောနေသလိုဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့ အင်န်အယ်ဒီက မှတ်ပုံတင်မယ့် အလားအလာရှိတယ်လို့ ပြောလာကြတယ်။
အင်န်အယ်ဒီပါတီဆိုတာက နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တော့ ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်တာတို့၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်တာတို့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာတို့ စတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းသွင်ပြင် လက္ခဏာတွေကို သွေဖီပြီး အမြဲတန်း နေလို့ ရပါ့မလား ဆရာ။ ဒါတွေကို သူနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီး နေနေလို့ ရပါ့မလား။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခုဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီပါတီတရပ်ဟာ မှတ်ပုံတင်ရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုမှတော့ မြေအောက်သွားမယ့်အဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး၊ လက်နက်ကိုင်ပြီး အာဏာသိမ်းတဲ့ ပါတီလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ အရင်ကတည်းက ဘယ်လိုပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ တရားဝင်ပါတီတရပ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောထားကို ကျနော်တို့က ကိုင်စွဲထားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ပါတီက ရှိနေတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားသည်ဖြစ်စေ မဖြစ်စေ ရှိနေတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အင်န်အယ်ဒီပါတီနဲ့ အတူရပ်တည်ပြီး ရှိနေတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စကို စီအီးစီနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှပဲ ပြောလို့ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သူတဦးတည်း သူ့သဘောတခုတည်း ဆောင်ရွက်တာမျိူး မရှိဘူးဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာတို့ဘက်က မှတ်ပုံတင်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ မ၀င်တာ စတာတွေကို အချိန်အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်အထိ ပေးထားသလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားသလိုပေါ့။ ကျနော်တို့က ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာကို ငြင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တယ်ဆိုတာက ပါဝင်နေတာပဲ။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမှာ ဘယ်လိုစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ထားသလဲ၊ ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားတွေကို ရှိနေသလဲ။ ဒါတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ ဘာာပဲပြောပြော ကျနော်တုို့ကတော့ သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ ဒါတွေကို အဖြေပေါ်အောင် လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ပါတီ မှတ်ပုံတင်မလား၊ မတင်ဘူးလား။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မလား၊ မ၀င်သေးဘူးလား ဆိုတာတွေကို ကျနော်တို့က ဒီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ အဖြေထုတ်ရမယ်၊ အဖြေပေးရမယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ပြောချင်တယ်။
အဲသည်တော့ ဆရာ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲသည်အပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားတွေ ဖြစ်နေကြသလဲ ဆရာ။
တချို့ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီက မှတ်ပုံတင်ပြီး ၀င်မယ်ဆိုရင် အမတ်ဦးရေကလည်း ၄၉ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။
သူတို့သတ်မှတ်ထားချက်တွေအရ နယ်စွန် နယ်ဖြားက ကို်ယ်စားလှယ်တွေကို ထုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင် အမတ်ဦးရေကလည်း နည်းနည်းပဲ ရှိတယ်။ အဲသည်လို ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်အစား အင်န်အယ်ဒီပါတီက သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အနေအထားရှိလို့ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်လည်း မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် လှုပ်ရှားနေမယ်။ အခု လွှတ်တော်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အထိ ပါတီက မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်သွားပြီးတော့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ စည်းရုံးလှုံဆော်မှုတွေ
လုပ်သွားမယ်။ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖြစ်လာမယ်။ ဒီလိုမျိူး တွက်ချက်တဲ့သူတွေက တွက်တယ်။
ဒါဆိုရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကြီးကို ဆရာတို့က ဘယ်လိုမျိူး ရင်ဆိုင်မှာလဲ။ အဲဒါကိုကော တချို့တွေက ဘယ်လို
အဲဒါကြောင့် တချို့ကလည်း ဘာပြောသလဲဆိုတော့ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီးတော့ ရှိနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်၊ လွှတ်တော်ထဲအထိ သွား၊ ပါတီရဲ့ စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတွေကို ပြသရာရောက်တယ်။ လက်ရှိ စစ်တပိုင်းအစုိုးရနဲ့ တိုင်းပြည်အမှန်တကယ်အကျိူးရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို့ ရတယ်။ အချိန်စောင့်နေစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောတာမျိူးတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီဖက်ကို အားသန်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစုိုးရအင်အားတွေနဲ့ ပိုပြီး လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေ ဖော်ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့ တချို့က ပြောလာတယ်။ ဥပမာ အခုပဲ မြစ်ဆုံဆည်လိုဟာမျိူးကို ရပ်စဲပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ အဲသည်ကနေတဆင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေး၊ တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ တိုးမြှင့်ရေး၊ ရရှိရေးတွေကို မြင့်တက် ဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့သူတွေကလည်း ရှိလာတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဖက်က ပြောစရာရှိတာက ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကြီးက ကန့်လန့်ကြီးခံနေတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာကလည်း ကျနော်တို့အပေါ်မှာ တင်းတင်းမာမာ လုပ်ထားတာတွေ ရှိတယ်။ အဲသည် ဥပဒေတွေက အဲသည်လုိုမျိူး မဟုတ်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့က မှတ်ပုံတင်တဲ့ကိစ္စက ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရင်ဆုံး မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေက အချက်အလက်တွေ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းလုပ်လိုက်ရင် ဥပမာ – ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို သစ္စာခံရမယ်တို့၊ အဲသည်တုန်းက အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပါတီကနေ ပစ်ပယ်ရမယ်တို့၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စွန့်လွှတ်ရမယ်တို့ ဆိုတာတွေကြောင့် ကျနော်တို့က
ဒါဆိုရင် ပါတီမှတ်ပုံတင်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာနဲ့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်တာတွေအတွက် အဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ အခြေအနေတွေ အပြင်အဆင်တွေ လိုအပ်တယ်၊ လုပ်ရမယ်လို့ ဆရာက ပြောချင်တာပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို သိပ်ပြီးတော့ တင်းတင်းမာမာကိုင်တွယ်တာ မရှိဘူးဆိုရင် မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုတာက လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းဆိုတာမှာကျတော့ အချက်တခုအနေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်တာ မရှိ်ဘူး၊ ဖယ်ရှားနိုင်တာလည်း မရှိဘူး၊ စစ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ လွှတ်တော်ကြီးဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးဟာ အများကြီး အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဟိုတုန်းက မဖြစ်သေးတဲ့ လွှတ်တော်နဲ့ အခုပေါ်လာတဲ့ လွှတ်တော်က အခင်းအကျင်းမှာကော ဘယ်လုိုမျိူး မြင်တွေ့ရပြီလဲဆရာ။ ခုနင်က သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ လက်ရှိ အနေအထားကို ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကော။
အစုိုးရဖက်က ဘယ်လောက် အခုလက်ရှိမှာ ဘယ်လောက်လိုလားသလဲဆိုတာနဲ့ ကြည့်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခု သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ပြောသွားတာ တခုရှိတယ်။ အခြေခံဥပဒေတွေလည်း
ပြင်သင့်ပြင်ရမှာပဲလို့ ပြောသွားတာရှိတယ်။ အဲသလိုဆိုရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာလည်း မူတည်တာပေါ့။ အဲသည်အတွက် နောက် ၅ နှစ်လုံးလုံး ၁၅ နှစ်လုံးလုံး စောင့်ဆုိုင်းနေစရာမလိုဘဲ အခုကတည်းက လွှတ်တော်တွင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလက္ခဏာတွေက စစ်လက္ခဏာတွေကို ကျော်လွှားပြီး ဘယ်လောက် ဖော်ဆောင်လာနိုင်လဲဆိုတာကို ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။
အခုအချိန်မှာ အင်န်အယ်ဒီကို မှတ်ပုံတင်ဖို့ တော်တော်လိုလိုလားလားရှိနေတယ်ဆိုတာကို မြင်တွေ့နေရတယ် မဟုတ်လားဆရာ။ ဒေါ်စုနဲ့ ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဒါကို အစုိုးရဖက်က ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုလိုလားလား ပြောတဲ့ပုံကို တွေ့နေရတယ် မဟုတ်လားဆရာ။
အဲလို ပြောလို့ရမယ်ဆိုရင် အဲသလို ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အင်န်အယ်ဒီပါတီဟာ လက်ရှိမှာ အင်အားအကြီးဆုံးပါတီ၊ ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း ခံထားရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကို ပိုင်စုိုးထားတဲ့ပါတီ
ဖြစ်တယ်။ အဲသည်လိုပါတီကို ဥပဒေပြင်ပမှာ မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ရပ်တည်နေရတယ်ဆိုတာကလည်း မကောင်းတဲ့ အလားအလာပဲ။ နောက်တချက်ကလည်း ဒီပါတီဟာ ဥပဒေအတွင်းကို
ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အကျိူး၊ ဒီမုိုကရေစီအကျိူး၊ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးတွေကို အများကြီး ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
ထို့အတူ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ပြောသလို အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်တွင်းမှာလည်း ဆောင်ရွက်လာမယ်၊ ဒီမိုကရေစီလက္ခဏာတွေ ဖော်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင် ချောမွေ့လာမယ် ဆုိုရင် အင်န်အယ်ဒီပါတီကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်သာအောင် ၀င်လွယ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမုိုကရေစီရေး အပြောင်းအလဲ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆိုရင်ဖြင့် အင်န်အယ်ဒီပါတီရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်ဖော်ဆောင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အစုိုးရစနစ်များ ပေါ်ထွန်းရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ နောက်ဆက်ပြီး မေးချင်တာကတော့ အပြောင်းအလဲတွေ တကယ်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကို လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ တိုင်းတာကြည့်ပြီး ပြောနိုင်သလား
U Win Tin – ပြည်သူလူထုမှာ ပြောရေးဆိုခွင့် မရှိရဘူးလား
– အခုဘာတွေတွေ့ရသလဲဆိုတော့ မြန်မာဒီမုိုကရေစီရေးအတွက် လက်တွေ့အကျိူးသက်ရောက်မှုတွေ စတွေ့နေရတယ်လို့ ပြောရင် ရတယ်ပေါ့။ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စလိုမျိူးကိုမှာ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ဆိုပြီး ၂ ပိုင်း ကြည့်မယ်ဆုိုရ င်ပြည်သူလူထုတွေဖက်က တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ပညာရှင်တွေ၊ စာပေ ဂီတ အနုပညာရှင်တွေ၊ ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေသာမက နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုချက်တွေ ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြင်တွေ့ရတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဖက်က ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီမြစ်ဆုံဆည်ကို ရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒါဟာ အများပြည်သူလူထုရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောတာ၊ နာခံတာ ဆိုတဲ့ သဘောကို သက်ရောက်တယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနိုင်ခြင်းဟာ ဒီမုိုကရေစီလက္ခဏာများ ရှိသင့်သလောက်ရှိလာလို့သာ အနိမ့်ဆုံး အခြေအနေများ ပေါ်ပေါက်လာလို့သာ တောင်းဆိုလာနိုင်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ နို့မို့ဆိုရင် ဦးသန်းရွှေအစုိုးရသာ ငုတ်တုတ်ကြီး ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေဖက်ကလည်း အခုလို စာပေ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သစ်ပင်စိုက်တာတွေ၊ အခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။ နောက်ပြီး အခုဦးသိန်းစိန်လုပ်သလို လွှတ်တော်ဆီကို တင်ပြတာတွေ လုပ်မယ့်အစား ဦးသန်းရွှေဖက်က အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းပစ်လိုက်မယ်လို့ တွေးကြည့်နိုင်တယ်။ ဒီအခြေအနေ တွေကို ကြည့်ရင် အခုလို အကျိူးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်။ မြစ်ဆုံဆည် ရပ်ဆိုင်းခြင်းဟာ လက္ခဏာတခုလို့ ပြောရင် ရတယ်။
– ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်တဲ့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဟာ ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ကို မပြောခင် ဥပမာ စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းလောကမှာလည်း လုံလောက်တဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ မရှိသေးသော်လည်း ဂျာနယ်တွေ စာစောင်တွေ အတော်များများ ပေါ်လာတယ်၊ လွှတ်တော်တို့၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ၊ အင်တာဗျူးတွေ အတော်အသင့် ရေးသားဖော်ပြလာနိုင်တယ်။ နယ်တွေမှာ ဆိုရင်လည်း နောက်ပြီးတော့ လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်မြေအရေးကိစ္စတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ၊ ချီတက်ဆန္ဒပြတာတွေ လုပ်ကိုင်လာနိုင်တယ်။ အလုပ်သမားကိစ္စတွေ ကျောင်းသားကိစ္စတွေမှာလည်း သိသိသာသာကြီး အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်နိုင်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးကိုဦးတည်တဲ့ အခြေအနေတော့ ရှိနေတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အခြေအနေဆိုတာကလည်း တကယ်ကိုစေတနာကောင်းနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ၊ အပြုအပြင်တွေဆီကို အကျိူးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေမှာလား၊ အယောင်ပြပဲ ဖြစ်သလားဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ကိုင်ရင်း တွေ့ကြရမှာပေါ့။
– အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ အရေးပါတဲ့ အရေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့ ပြည်သူလူထုက မျှော်လင့်နေကြတယ်။ ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျနော်တုို့တွေက အမြဲ ထုတ်ဖော်ပြောဆို တင်ပြနေရမယ်။ အလားတူပဲ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စကလည်း ခုထိ ရေရေရာရာ မရှိသေးဘူး။ ဆွေးနွေးပုံဆွေးနွေးနည်း၊ သတ်မှတ်ပုံ သတ်မှတ်နည်းတွေ ကွာဟတွေရှိတယ်။ တဖက်က ဖယ်ဒရယ်အဆင့်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်တယ်။ အစုိုးရကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အဆင့် ဆွေးနွေးမယ် ဆုိုတာမျိူးတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေကို အများပြည်သူအပါအ၀င် သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ သဘောထားတွေ၊ အာဘော်တွေ ထုတ်ဖော် တင်ပြနိုင်မှ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့ အဖြေရှာနိုင်မယ်။ ကန့်သတ် ပိတ်ဆို့ထားလို့ မရဘူး။ နောက်တပိုင်းကလည်း လယ်သမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ မတရားအလုပ်ခံရတာတွေကို ကာယကံရှင်တွေမှာ ဖော်ထုတ်တင်ပြခွင့်တွေ ရှိမှ တောင်းဆိုမှုတွေ ခွင့်ပြုမှ အများက အမှန်တရားကို သိခွင့်ရမယ်။ အစုိုးရကလည်း သိရှိမယ်။ အဆင့်ဆင့်သော အာဏာပိုင်တွေမှာလည်းပဲ ဖြေရှင်းဖို့ အခွင့်အရေးရကြမယ်။ ဒါတွေကို ဖုံးဖိထားမယ်၊ ကန့်သတ်ထားမယ်၊ မပြောမဆိုရဘူး၊ လှုပ်ရှား တောင်းဆိုခွင့် မရှိဘူးလို့ လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီလို အရေးအခင်းတွေကို စောစောစီးစီး အချိန်မီ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် အများကြီး နောက်ကျုပြီးမှ အကြပ်အတည်းတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့မှ မထိန်းမသိမ်းနိုင်ဖြစ်တာတွေ၊ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်တာမျိူးတွေ ဘယ်သူမှ မလိုလားဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း မဖြစ်ချင်ဘူး၊ လက်ရှိအစုိုးရတွေကလည်း ဖြစ်ချင်မယ် မထင်ဘူး။
– ဟုတ်ပါတယ်။ အနီးဆုံး ပြယုဒ်ကတော့ ရွေှ့ဝါရောင်နှစ်ပတ်လည်ကိစ္စပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စက အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပဲ။ ဒီနှစ်ပတ်လည်ကို ဖုံးကွယ်ထားလို့လဲ မရဘူး၊ ရှောင်ရှားနေလို့လဲ မရဖူး။ ဒါကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမှာပဲ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ၊ အခြေအနေတွေကုို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တုို့က ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဆွေးနွေးနေလို့၊ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ပြောဆိုနေလို့ ရွှေဝါရောင်ကို မပြောရဘူး၊ မလုပ်ရဘူးလို့ တားလို့ မရဘူး။ ဒါကို အရှိအတုိုင်း လက်ခံရမှာပဲ။ ရွေှ့ဝါရောင်ကာလတုန်းက သံဃာတော်တွေ ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်။ လွတ်မြောက်ဖို့ ပြောကြရမယ်။ ရွှေဝါရောင်တုန်းက တောင်းဆိုချက်တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမှာပဲ။
– ကျနော်တို့ဖက်က သိပ်ပြီး ကြောက်ရွံ့နေစရာ၊ စိုးရိမ်နေစရာမလုိုဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ လက်ရှိအစုိုးရဖက်ကလည်း အခုလိုအခြေအနေမျိူးမှာ ဖမ်းဆီးမယ်၊ ပစ်ခတ်မယ် လုပ်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး။ အောက်ခြေက စစ်သားတွေ၊ ရဲတွေဖက်ကလည် သူတို့သဘောနဲ့ အကြမ်းဖက်တာတွေ ဘာတွေ လုပ်လာကြမယ် မထင်ဘူး။ ကျနော်တို့က စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ တဖက်သတ်ဖြစ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ရဲ၊ မကုိုင်ရဲ၊ မတောင်းဆိုရဲ ဖြစ်နေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ပြည်သူတွေက ထုတ်ဖော် ပြောဆို ဖြေရှင်းမှသာ အစုိုးရလုပ်သူတွေဖက်က စောစောစီးစီး သိရှိနားလည်ပြီး အဖြေရှာနိုင်မယ်။ စောစောစီးစီး အဖြေရှာနိုင်မှသာ အနာမရင်းခင် ရှင်းနိုင်မှာပေါ့။ ဒါမှ တိုင်းပြည်တခုလုံး ပေါက်ကွဲကုန်တဲ့ အခြေအနေမျိူးကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ အားလုံးက စိတ်မတိုဘူး၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထားကြမယ်။ ပြေပြေလည်လည် ပြောဆို ဆွေးနွေးဖြေရှင်းတာတွေကို ကျနော်တို့တွေအားလုံးက ခုချိန်မှာ အလေ့အကျင့်လုပ်ကြရမယ်လို့ ကျနော်က မျှော်လင့်ပါတယ်။
NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမ၀င်ရေး ဆိုတာထက် မှတ်ပုံတင်ရေးကို ဇောက်ချစတင်လုပ်ဘို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မိုးရွာတုံးရေခံသင့်တဲ့ အညေခအနေကောင်းတခုပါ။ကြည့်ရတာကတော့ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေဟာ သက်ဇိုးရှေမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဟန်မပျက်အဓိကပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မလား။ အပြောင်းအလဲတခုခုကတော့ကြိမ်းသေပေါက်ဖြစ်လာမှာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမ၀င်ရေးကတော့ အခြေအနေကိုသေသေခြာခြာကြည့်သင့်ပါတယ်။ (၁၉၆၂) တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်ခါစက လူထုက “ဒို့..ဗိုလ်ချုပ်အစိုးရ” ဆိုပြီး လက်ကမ်းကြိုခဲ့တာကတကြိမ်၊ (၁၉၇၄) ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့်ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်သက်တမ်းကာလ တုံးက မြန်မာပြည်ကြီးရွှေမိုးငွေမိုးရွာမလိုစ်ြခဲ့တာကတကြိမ်၊ စသည်တို့ကိုကြည့်ရင် အစိုး၇သစ်တက်ခါစမှာ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ပြီး ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စာ၇ိတ္တပျက်ယွင်းမှု၊ အစိုးရအတွင်းအဂတိလိုက်စားမှုတွေက အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးလာပါတယ်။ ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးမ၀င်ရေးဟာ NLD အတွက်ရော NLD ကိုအားကိုးတဲ့ လူထုအတွက်ပါသိပ်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းမို့၊ ချက်ချင်းကြီးမဆုံးဖြတ်သင့်ဘူးထင်ကြောင်းပါ။
ဘာဘဲပြောပြော မှတ်ပုံတော့ အရင်ဆုံးတင်ထားသင့်တယ်..လို့ထင်တယ်။
ဒါမှလဲဘဲ ပြည်သူတွေလဲ အားတက်လာပြီး NLD ရဲ့လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ခရီး
တရားဝင်ပါတီမဟုတ် သေးရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တခြားတရားဝင်ပါတီတွေ..တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့
NLD အနေနဲ့ ထွေးပြီးသား တံထွေးပြန်မြိုရခက်နေ တာပါ။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကို လက်မခံနိုင်ဆိုတာရယ် ၊ ပါတီ က ဆက်လက် တည်ရှိနေပါတယ်ဆို ပြီး အခိုင်အမာ ဆို ထား ခဲ့တာ ရယ်ကြောင့် ပြန်မှတ်ပုံတင်ရမယ် ဆိုတာ ပြောရခက်နေပါတယ်။
သို့သော် လည်း တိုင်းသူ ပြည်သား အများစုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ NLD ကို သာ မဲ အားပါးတရ ပေး ဖို့ စောင့်မျှော်နေကြတာမို့ ၊ တိုင်းသူပြည်သား အများ လိုအင်ဆန္ဒဖြည့်ပေးဖို့ ထွေးပြီးသား တံထွေးကို ရဲရဲကြီး ပြန်မြိုပြဖို့ လို အပ်နေပါပြီ။
စစ်အုပ်စုနဲ့ စစ်ဥစုပ်လိုသူများက အန်အယ်လ်ဒီကို ခေါင်းလျှိုဝင်စေချင်မှာပါ။ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ယနေ့အချိန်လောက် နိုင်ငံရေးအားသာနေချိန် မရှိသေးပါဘူး။ ပါတီခါင်းဆောင်တွေ စုံစုံညီညီရှိနေတယ်၊ စစ်တပ်အပါအဝင် ပြည်သူတွေအားလုံး အပြောင်းအလဲကို မျှော်လင့်နေတယ်၊ ပြည်ပဖိအားတွေ စုံချက်တခုကို ရောက်နေတယ်။ စစ်အစိုးရမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး အကျပ်အတည်းတွေ့နေတယ်။ တရုတ်နဲ့ကုလားအကြား လှည့်ပတ်ဆော့လာခဲ့တဲ့ဗျူဟာ အဆင်မပြေတော့ အမေရိကန်ကိုပါ လက်ယက်ခေါ်နေရပြီ။ ဒီတော့ အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ရထားတဲ့ အခင်းအကျင်းကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်။ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ တမတ်သားရွေးဂေါက်ပွဲ ဥပဒေကို ပြင်ဖို့ကြိုးစားတာကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးလိုလိုက နားလည်ပေးကြမှာပါ။ အဲဒါတွေမတိုင်ခင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီအတွက် တဦးထဲတိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်သွားဖို့ရာ အချိန်လွန်သွားပါပြီ။ အနာဂတ် တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု ရှိကိုရှိရပါမယ်။ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များသည် အသင့်အတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုမှုရှိဖို့ မဖြစ်မနေတောင်းဆိုရပါမယ်။ တင်းမာတာမဟုတ်ဘဲ သင်ပုန်းချေဖို့ လိုအပ်ချက်တခုအနေနဲ့ ရှိရမဲ့အရာပါ။ ဒေါ်စုကို တချိန်မှာ သမိုင်းတရားခံ မဖြစ်စေလိုပါ။ စစ်တပ်က ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အနှစ်၂၀ကျော်သွားလို့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအစစ်အမှန် မဟုတ်တော့ဆိုရင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုက လွှတ်တော်အမတ်များ ဒဲ့ပြိုင်ပြီး လူထုဆန္ဒခံယူနိုင်ကြပါတယ် (သတ္တိရှိရင်ပေါ့လေ)။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ မိမိကိုယ်အားညဏ်အား ပြည်စုံနေတုန်းမှာ စစ်တပ်လိုပြောရင် ဦးစီးချုပ်တာဝန်ရော၊ ကွပ်ကဲရေးမှူးချုပ် တာဝန်ကိုပါ ထမ်းဆောင်ရပါမယ်။ နောက်တော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ နာယကတာဝန်များ လွှဲပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ပြောင်းချင်ရင် ညတွင်းချင်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ရှိဖို့သာလိုတာပါ။ အခုလည်း အစိုးရသက်တမ်း ၆လကျော်လာပြီ မယ်မယ်ရရ ပြောင်းလဲမှု မတွေ့ရပဲ လေသာများနေတာရှိတယ်။ ဦးသိန်းစိန် ကြည်းတပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်လို့သာပါ၊ လေတပ်ကသာလာရင် မြန်မာပြည်မှာ နောက်ထပ် နာဂစ်မုန်တိုင်းတခု ထပ်တိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော် ပို့စ်တခုမှာ ရေးခဲ့သလိုပါပဲ စစ်အစိုးရက အာဏာရအစိုးရ၊ ကြံ့ဖွတ်ပါတီ၊ စစ်တပ် စတဲ့ဒေါက်တိုင်များကို စစ်ဥစုပ်လိုသူ အချောင်သမားများ၊ ဒလျှိုဒလံများ၊ စားဖားများနဲ့ အချိန်ဆွဲ ဈေးဆစ်သွားမှာပါ။ သူတို့လမ်းစဉ်က အီရန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ တို့မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးပါ။ အခြေခံဥပဒေအသုံးပြုပြီး ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းစဉ်အောက်ကနေ လွဲချော်သွားရင် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ အန္တရာယ်ပြုမှု၊ သစ္စာဖောက်မှုတို့နဲ့ နှိပ်ကွပ်ပါမယ်။ ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အားလုံးလက်ခံတဲ့ ခေါင်းဆောင်ရှိတုန်း ပြင်နိုင်ရပါမယ်။
အန်အယ်လ်ဒီကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်စေချင်ရင် ပထမအဆင့် ဖြစ်သင့်တာ ပြင်သင့်တာပြင်၊ ပြုသင့်တာပြု၊ လွှတ်သင့်သူလွှတ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယအဆင့် လက်ရှိလွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်း ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်အမတ်များ နုတ်ထွက်ပေးပြီး လွတ်လပ်မျှတတဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ပါ။ တမတ်သား စစ်အမတ်ကိစ္စက ကာလအပိုင်းအခြားတခုအတွက် ညှိနှိုင်းစေ့စပ်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် လွှတ်တော်ကနေ သူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပယ်ဖျက်၊ လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံလို ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ပါ။ အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ရေးကို ပထမအစိုးရသက်တမ်းမှာ ဆောင်ရွက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စများအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးသည် မြင်သာထင်သာရှိရပြီး လအနည်းငယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့………
သူကြီးရဲ့ဆိုက်အပေါ်ထားရှိတဲ့ စေတနာကို နားလည်မိပေမယ့်
သူကြီးတစ်ယောက် လည်း ရွာသူ/သား တွေ ဓါတ် ၁၀၀% ကူးသွားတာကို တွေ့ မြင်ရလို့ 
Do as what I said , Don’t as what I do .
အဟစ်အဟစ် (copy from windtalker)
မျှော်လင့်မှုများစွာ ဖြင့် အင်န်အယ်ဒီ အရိပ်အောက် နားခိုလျှက်———****
နိုင်ငံရေး ခရီးကြမ်းကိုပြောတာပါ။မှတ်ပုံတင်မရှိလို့ ကုလားခရီးမသွားရတာကိုမပြောလိုပါဘူး။
၁၉၉၀ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ တခဲနက်ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု တရားဝင်အနိုင်ရ NLD ကို ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာရေး၊ ကိုယ့်ဘာသာမဲပေး၊ ကိုယ့်ဘာသာထောက်ခံတဲ့ ဇွတ်အတင်းအတည်ပြု အခြေခံဥပဒေကို ကိုင်ပြီးတက်လာတဲ့ (နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်မပြု) အစိုးရက ပါတီအသစ်ကလေးဖြစ်အောင်၊ မသန့်ရှင်းမမျှတတဲ့ အခြေခံဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို လက်ခံလာအောင် မလိမ့်တပတ်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းတာလို့ ထင်ပါတယ်..။
ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ မျှတကောင်းမွန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေပေါ်မှာ တည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ပေါ်ထွက်လာပြီး လူထုအကျိုးအတွက် သန့်ရှင်းစွာပြိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပနိုင်မှ တိုင်းပြည်အနာဂတ် ကောင်းမွန်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်…။
ကျုပ်ကတော့ လက်ဝှေ့ပွဲတစ်ခုလိုမြင်တယ်၊ပြိုင်ဘက်ကို အလဲထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးဝိုင်းထဲကိုတော့ ၀င်ရမယ်၊လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်(၂၀)က ချန်ပီယံဘွဲ့ရဘူးတာကို ယနေ့ထိငါ ချန်ပီယံပဲလို့မှတ်ယူထားလို့မရတော့ဘူးလို့ထင်တယ်၊ကြိုးဝိုင်းထဲကိုဝင်ရင်တော့ အမည်စရင်းပေးရမှာပဲ၊စည်းဝိုင်းထဲမှာတော့ သက်လုံကောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်၊ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာနဲ့နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်တဲ့ပွဲဆိုရင်တော့ …ချန်ပီယံဟာချန်ပီယံပါပဲ။
ကြိုးဝိုင်းထဲကို ဝင်ကြည့်ဖို့ပဲ လိုတော့တာ ကိုယ်ထင် ကုတင်ရွှေနန်း ပြောလိုက်ချင်တယ်
အရိပ်လိုချင်လို့ နေပူပူထဲက စောင့်ပီးကြပါပီ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ
ချန်ပီယံဟာ ချန်ပီယံ ပါပဲ ။
ကျုပ်တစ်ခုပြောခြင်မယ်။ အုပ်ချုပ်နေတဲ. အစိုးရက တရားဝင်အစိုးရလို. ထင်ကြလား။ေ၇ှ.မှီနောက်မှီလူတွေသိကြမှာပါ။ ဒါဆို တရားမ၀င်တဲ.အစိုး၇ဆီမှာ တရားဝင်ဖို.ကြိုးစားနေတာ ဘာအကျိုးထူးလာမှာလဲဗျ။ ကိုယ်.လမ်းကြောင်းနဲ. ကိုယ်လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါက စိတ်ဓာတ်နဲ.ပြောချင်တာ။ လောလောဆယ် အခြေအနေအ၇တော. သိန်းစိန်ကြီး ပြည်သူအကြိုက်ခြေကုပ်ယူနေတယ်ပြော၇မယ်။ တကယ်လို. တိုင်းပြည်မှာ ထောက်ခံသူများလို. သူအခြေခိုင်လာရင် ၊ထောက်ခံသူများလာရင် (အဘိုးကြီးအပါအ၀င် ကျန်တဲ.ကောင်တွေကို သူသိပ်ကျွတ်စ၇ာမလိုတော.) ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းတဲ.ပြေင်းလဲခြင်းတွေ သူလုပ်နိုင်မယ်လို.ထင်တယ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ၁၀၀ မှာ ၁၀ ရာခိုင်းနှုန်း မျော်လင်.ကြည်.၊ ယုံကြည်.တာနော်။
တိုင်းပြည်အကျိုးရှိဖို့ဆိုရင် ရန်ငါစည်းမထားဘဲ ကမ်းသောလက်ကို ဆုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်။
သံသယတွေ ခေတ္တဘေးချိတ်ပြီး ပူးပေါင်းကြည့်မှ ရှေ့တစ်လှမ်းတက်ပါမယ်။
NLD အနေနဲ့ မှတ်ပုံတင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ရောက်သွားမှာပါ။
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနေနိုင်ဖို့ကတော့ မှတ်ပုံမတင်သေးပဲ အားစမ်းနေတာ
ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်ကျရင် NLD ဘက်ကလျော့သင့်တာလျော့ပေးပေါ့နော်
.ခုကတော့ မှတ်ပုံတင်မပါလဲ ခရီးဆက်သွားနေလို့ရသားပဲ..
ပြီတော့ကာ..မြစ်ဆုံအရေး မှာပြည်သူတွေနိုင်တယ်ထင်ရပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ ထောက်ခံမှုအတော်ရသွား..၊
စောင့်ကြည့်သင့်တာကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးတဲ့ကိစ္စလိုမျိုး..သူတို့အနေနဲ့.
ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးနဲ့ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်ဘက်လုံးက လျှော့သင့်တာတွေလျှော့ကြပါ။ အထူးသဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက nldကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကွက်ခဲ့တော့လျှော့စရာရှိရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကဘဲလျှော့ရလိမ့်မယ် nld လျှောက်နိုင်မယ့် လမ်းကို ဖွင့်ပေးရမယ် ဒါမှပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ စည်းလုံးတဲ့မြန်မာပြည်ဖြစ်လာမှာ